Ihe ị ga-ahụ ma gaa na obodo Dublin | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Dublin, General, Ireland
La isi obodo Ireland na-enye anyị ọtụtụ ihe iji hụ. Ebe ọtụtụ ndị njem nleta na-aga ịchọ obodo dị ndụ gbara gburugburu gburugburu ebe ndị mara mma. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị iji hụ ụlọ ochie, mụta akụkụ nke akụkọ ihe mere eme ha ma nwee ọ visitsụ nleta dị ka ụlọ ọrụ Ginness.
Ọ bụrụ na-amasị gị na Ireland, ya ala ahihia ndu na omenala ha, n'ezie Dublin so n'ime ebe ndị ị na-echere. Obodo a, nke Vikings guzobere na narị afọ nke XNUMX, na-anọgide na-abụ ebe dị mkpa ma na-achịkọta ụdị edemede niile nke akụkọ ihe mere eme yana ebe ezumike maka njem nleta kachasị atọ ụtọ. Lezienụ anya n'ebe ndị a ị ga-ahụ ma gaa na obodo Dublin.
1 Ụlọ ahịa ụlọ Guinness
2 Ihe akpụrụ akpụ nke Molly Malone
4 Katidral St. Patrick
7 Mkpọrọ Kilmainham
8 Castlọ Dublin
Lọ nkwakọba ihe nke ndị a ma ama guinness biya Ọ meghere ọnụ ụzọ ya na 2000 ịrara onwe ya nye ọha mmadụ. Nke a bụ otu n'ime nleta anya kachasị anya mgbe ị rutere Dublin, ọ nweghịkwa onye na-anaghị akwụsị ị stopụ biya. Thelọ ahụ nwere ọtụtụ ala, na nke ọ bụla anyị nwere ike ịhụ ihe dị iche, site na gịnị bụ ihe biya maka akụkọ ihe mere eme nke akara, mkpọsa mgbasa ozi ya ma ọ bụ ihe usoro ịme biya. Ihe kacha mma dị n'elu ụlọ, ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ nnukwu echiche nke obodo ahụ mgbe anyị nwere pint.
Ihe akpụrụ akpụ nke Molly Malone
La molly malone akụkọ Ejikọtara ya na akụkọ ihe mere eme nke Ireland n'onwe ya, ọ bụkwa na ọ bụ akụkọ obodo mepere emepe nke bilitere gburugburu abụ nke ghọrọ abụ na-akwadoghị nke obodo Dublin. Ọ bụ ihe dị ka onye na-ere azụ̀ nke na-ere okuko na azụ̀ na-agba akwụna n’abalị. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ihe akpụrụ akpụ na Suffolk Street.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ n'okporo ámá dị egwu na Dublin, nke ahụ bụ Temple Bar. .Zọ a aghọwo ebe ntụrụndụ nke onye ọ bụla hụrụ n'anya nha anya, ọ ga-ekwe omume ịchọta ọtụtụ Ogwe osisi na ụlọ mmanya ndị Irish na-ahụkarị. N'ụbọchị, a na-enwekwa ntụrụndụ ndị ọzọ, dịka ahịa nri ma ọ bụ ahịa akwụkwọ. Enwekwara veranda nka ma obu ulo ahia ndi ozo. Obi abụọ adịghị ya na okporo ámá a na-aghaghị ileta, ma ehihie ma abalị, ebe ọ bụ na ọ nwere ikuku n'oge niile.
Katidral St. Patrick
Emeputara na nsopuru nke onye nso nke Ireland, Saint Patrick, n’akuku olulu miri nke ndi nso mere baptism. Na mgbakwunye na ịbụ ụlọ mara mma, anyị nwere ike ịhụ n'ime ya, ebe anyị ga-ahụ dị iche iche mbadamba nkume ma ọ bụ ili na busts nke ndị dị mkpa na akụkọ ntolite Irish.
Na Dublin anyị ga-ahụ ogige ntụrụndụ kasị ukwuu na Europe, ogige Phoenix. Ọ dị kilomita ole na ole site na etiti ahụ, ọ bụkwa ebe kachasị mma iji zuo ike mgbe ọ gachara nleta ndị mepere emepe. Emere ogige a na mbụ dị ka ebe nchekwa, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ n'ime ha n'ogige ahụ. Na mgbakwunye, o nwere ihe ndị ọzọ nwere mmasị, dị ka Dublin Zoo, otu n'ime ndị kacha ochie n'ụwa, ma ọ bụ ihe akpụrụ akpụ nke Bird Phoenix, nke bụ ihe na-enye ogige ahụ aha ya. Obi abụọ adịghị ya, ebe zuru oke iji nọrọ ụbọchị izu ike na-agagharị na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Nke a mahadum kacha ochie na Ireland niile na enweghị mgbagha otu n'ime ndị kasị ama n'ụwa. Somefọdụ ndị edemede ga-abụ ndị mmadụ na ụwa ọdịnala agabigala na klas ya, dịka Oscar Wilde ma ọ bụ Bram Stoker. Ọbá akwụkwọ ahụ bụ otu ebe kachasị mma, ọkachasị ndị hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya, o nwekwara ọtụtụ nde akwụkwọ, ebe ọ bụ na ọ na-enweta otu akwụkwọ nke ọ bụla ebipụtara na Ireland na Great Britain. Anyị nwere ike ịgagharị na kampos na gaa Old Library na-enwe a pụrụ iche omenala gburugburu ebe obibi.
Mkpọrọ a bụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke Ireland, ọ bụkwa na ọtụtụ n'ime ihe odide kacha mkpa nke ndị lụọ ọgụ maka nnwere onwe. Taa, emechiri ụlọ mkpọrọ a mana ọ ka nwere otu ụdị ahụ siri ike na oyi. Enwere ike ịme njem nlegharị anya nke ya, bido na ụlọ ụka ahụ, na-aga n'ihu site na mkpụrụ ndụ ya na-enweghị mmasị ma na-akwụsị n'ogige ebe a na-egbu ndị mmadụ. Ha nwekwara ụlọ ebe a na-edebe ihe ochie ebe ihe ndị mkpọrọ dị.
Lọ a na-anọchi na etiti obodo A na-eji ya taa maka ihe omume, ọ bụ ezie na ọ nwere ihe ndị ọzọ, dị ka ebe agha ma ọ bụ ebe obibi nke eze. A pụrụ ịhụ ụlọ a na njem nlegharị anya nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu awa. Nwere ike ịhụ ọnụ ụlọ dị iche iche, dịka ime ụlọ ocheeze, ma nwee ọmarịcha gburugburu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ ma gaa na obodo Dublin